Soosaara hoos-u-dhiganta Warshad-saare, Shirkado-Shirkado - Shiinaha Soo-saareyaasha hoos-u-dhigga ah
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B082
GF-B082 Waxyaabaha hoos loo dhigay ee hoos loo dhigay, qaab dhismeedka guga nooca M, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, 38mm * 13.5mm iyada oo loo marayo booska ayaa looga baahan yahay salka albaabka. Alaabta dhex dhig, ku hagaaji baalka sheyga, kuna rakib daboolka dhammaadka qurxinta leh boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 380mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Kordhinta ： Iyada oo la marsiinayo finka, saxanka caadiga ah ee daboolka ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B062
GF-B062 Xidhmada hoos u dhiganta, qaab dhismeedka guga nooca M, oo ku habboon albaabbada boosaska ku leh caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, 38mm * 13.5mm iyada oo loo marayo booska ayaa looga baahan yahay salka albaabka. Alaabta dhex dhig, ku hagaaji baalka sheyga, kuna rakib daboolka dhammaadka qurxinta leh boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 380mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Kordhinta ： Iyada oo la marsiinayo finka, saxanka caadiga ah ee daboolka ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B042
GF-B042 Loogu talagalay albaabbada culus, waxay noqon kartaa qayb-dhex-dhexaad ama dibedda lagu rakibay. Buro isku hagaajinaya waxay ku yaalliin midigta ama bidixda. Waa la qabsan karaa si loo furo albaabada midig ama bidix. Waxaa badanaa loo isticmaalaa albaabbada u baahan daboolka dhawaaqa sare ee shirkadaha warshadaha iyo macdanta. Wixii rakibo ah nus-ku-rakib ah, ku dheji dherer dhan 44mm xagga hoose ee albaabka, ku dheji badeecada meeshiisa, oo ku hagaaji baalasha leh boolal. • Dhererka ： 450mm-2300mm • Farqiga dhajinta ： 3mm-15mm。 ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B09
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B08
GF-B08 Xidhitaanka hoos u dhigga shaashadda, farsamooyinka isku xidhka afar-geesoodka ah, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, 28mm * 13mm iyada oo loo marayo booska ayaa looga baahan yahay albaabka hoostiisa, oo sheyga ayaa lagu dhejiyaa, iyo taarikada daboolka ah iyo shaabadaba labada dhinacba waxaa lagu hagaajiyaa boolal (ama ka hooseeya xarigga daboolka leh boolal. ). Isticmaalka sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 330mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhamaad silver Lacagta Anodized • Fixin ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B07
GF-B07 Xidhmada hoos u dhiganta, farsamooyinka isku xidhka afar-afarta ah, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, 35mm * 14mm iyada oo loo marayo booska ayaa loo baahan yahay in lagu farsameeyo hoosta albaabka, oo sheyga ayaa lagu dhejiyaa, iyo taarikada daboolka iyo shaabada labada dhinacba waxaa lagu hagaajiyaa boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 330mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Iskuxirid ： Qalab bir ah oo aan lahayn ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B05
GF-B05 Xidhmada hoos u dhiganta, farsamooyinka isku xidhka afar-afarta ah, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen irridda. Markaad rakibayso, waa inuu jiraa 20mm * 12mm iyada oo loo marayo booska hoose ee albaabka. Dhig badeecada dhexdeeda, oo ku hagaaji saxanka daboolka iyo shaabad ku xir labada geesood boolal (ama ku hagaaji kor xagga hoose ee xarigga xiritaanka). Isticmaalka sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 260mm-1500mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacagta Anodized • Qabanaysa ： Iyadoo la adeegsanayo pre -...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B04
GF-B04 Loogu talagalay albaabbada culus, dhumucda albaabku waa inay ka badnaataa 45mm, taas oo inta badan loo adeegsado albaabada u baahan daboolka dhawaaqa sare ee shirkadaha warshadaha iyo macdanta. Inta lagu jiro rakibida, 44mm * 26mm iyada oo loo marayo booska ayaa loo baahan yahay in lagu farsameeyo hoosta albaabka, sheyga ayaa la dhigayaa, oo laga hagaajiyaa baalka sheyga, iyo daboolka dhamaadka qurxinta ayaa lagu rakibay boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 4 ...
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B03
GF-B03 Waxyaabaha hoos loo dhigay ee hoos loo dhigay, qaab dhismeedka guga nooca M, oo ku habboon albaabbada leh boosaska ku yaal caleen albaabka. Inta lagu jiro rakibida, 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska ayaa looga baahan yahay salka albaabka. Alaabta dhex dhig, ka hagaaji baalka sheyga, kuna rakib daboolka dhammaadka qurxinta leh boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Length ： 330mm-2200mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhameystir silver Lacag Anodized ah • Kuxirid ： Qalabka biraha ahama.
Qarsoodi hoos u dhig shaabad GF-B02
GF-B02 Waxyaabaha hoos loo dhigay ee hoos loo dhigay, qaab dhismeedka guga nooca M, oo ku habboon albaabka leh booska ku yaal caleen albaabka. Markaad rakibayso, 34mm * 14mm iyada oo loo marayo booska waa in lagu siiyaa salka albaabka. Shayga waa in lagu rido. Saxanka daboolka iyo duubista labada dhinacba waa in lagu hagaajiyaa boolal. Adeegsiga sheygan wax saameyn ah kuma yeelanayo qaabka guud ee albaabka. • Dhererka ： 330mm-2200mm • Farqiga isku xidhka ： 3mm-15mm • Dhammaystir silver Lacag Anodized ah • Iskuxirid ： Qalabka biraha ah ee birta ah Plu ...